अन्तिम चरणमा पुग्यो, चितवनमा बन्दै गरेको ' मिनि पानीजहाज' - DoroNepal
होमपेज मुख्य समाचार अन्तिम चरणमा पुग्यो, चितवनमा बन्दै गरेको ' मिनि पानीजहाज'
अन्तिम चरणमा पुग्यो, चितवनमा बन्दै गरेको ' मिनि पानीजहाज'
DoroNepal Reporter 7:19 AM मुख्य समाचार,
चितवनको नारायणी नदी किनारमा ‘मिनी पानीजहाज’ बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ!! आगामी डिसेम्बर भित्र सबै काम सकेर व्यवसायिक यात्रा गराउने तयारी हुदैछ!! दशैं अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिए पनि डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्नुपरेकोले दुई महिना ढिला भएको पानीजहाज बनाइरहेको राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्टले जनाएको छ!! पानीजहाजमा भीआईपी कक्ष, सेल्फी लिने तथा चलचित्र सुटिङ गर्न मिल्ने युनिट थपिएको छ!! डिजाइन परिवर्तन गर्दा १ करोड रुपैयाँ लागत र १० टन वजन थप भएको उनले बताए!! भरतपुर महानगरपालिका– १६ को ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनसँगै नारायणी नदी छेउमा निर्माण भइरहेको १०० फिट लम्बाइ र २५ फिट चौडाइको पानीजहाजमा दुईवटा इञ्जिन जडान भइसकेको छ!! जहाजको दुई तलामा सीसा राख्न बाँकी छ!!
जहाजभित्र चेन्जिङ रुम, पानी ट्ंयाकीलगायत राख्ने काम भइरहेको छ!! जहाजको पहिलो तलामा ९० र दोस्रो तलामा सयजना यात्रु अटाउन सकिन्छ!! पहिलो तलाको अगाडिपट्टि सेल्फी खिच्ने, चलचित्र, म्यूजिक भिडियो सुटिङ गर्ने खुला ठाउँ छ’ भने ‘दोस्रो तलाको एक छेउमा १० जना विशिष्ट व्यक्तिका लागि कुर्सीहरु हुनेछन्!! गत चैतबाट बनाउन थालिएको जहाजको कुल लागत १५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान!! पानीजहाज विहान ‘ब्रेकफास्ट’, दिउँसो ‘लन्च’ र साँझ ‘डिनर’ को मजासहित दैनिक करीव तीन घण्टाको तीन ‘सिफ्ट’ चल्नेछ!! ‘अब नारायणी किनार पूर्ण रुपमा ‘रिक्रिएसन सेन्टर’ बन्नेछ!! ‘नेपालको जल पर्यटनमा यो हाम्रो प्रयास कोशेढुंगा सावित होस्!! सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन बर्ष मनाउने तयारी गरिरहेको बेला नारायणीमा एकैपटक दुईसय जनालाई जलयात्रा गराउने जहाज निकै उपयोगी साबित हुने विश्वास छ!! पर्यटकहरुले यो जहाजमा बसेर प्रतिघण्टा ३५ किलोमिटरको वेगमा काभ्रेघाट–देवघाट र देवघाट–गोलाघाट जलयात्रा गर्नसक्ने छन्!!
कम्पनीले पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७० अनुसार सरकारबाट सञ्चालन स्वीकृती लिएको छ!! पानीको अत्यधिक बेग हुने बर्खाको तीन महिना यो सेवा बन्द रहनेछ!! देशको पहिलो ठूलो पानीजहाजको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाउने तयारी!! राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले रिसोर्ट पनि सञ्चालन गर्नेछ!! पानीजहाजले पूर्णता पाउनासाथ करिब १० करोड रुपैयाँ लगानीमा रिसोर्टको काम थाल्ने तय गरिएको छ!! पानीजहाज र रिसोर्ट सञ्चालनका लागि कम्पनीले ज्ञानेश्वर सामुदायिक बनसँग २० बर्षका लागि डेढ बिघा जग्गा भाडामा लिएको छ!!
Posted by DoroNepal Reporter at 7:19 AM